लोकसभा निर्वाचनः आफ्नै परिवारको भोट नपाएपछि उम्मेदवारको रुवाबासी !(भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
लोकसभा निर्वाचनः आफ्नै परिवारको भोट नपाएपछि उम्मेदवारको रुवाबासी !(भिडियोसहित)
एजेन्सी । पन्जावको जालन्धर लोकसभा सिटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका एक उम्मेदवारलाई परिवारकै सदस्यले भोट नदिएपछि ती उम्मेदवार रोएका छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएर उनलाई परिवारकै सबै सदस्यले भोट हालेनन् । कुल ८४० भोट ल्याएका उम्मेदवारको नाम हो निटु । यहाँको टान्डा सडकमा यिनको सटरको कारोबार छ। जालन्धर मात्रै नभएर आसपासको इलाकामा पनि निटु शटरावालाको नाममा चर्चित छन् ।
उनी चार वर्ष पहिले गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि चर्चामा आएका थिए । गणतन्त्र दिवसमा निटुले एक शंकास्पद वस्तु फेला पारका थिए। त्यसपछि उनी चर्चामा आएका थिए। अब जालन्धर सहरमा कुनै भित्तो नहोला जहाँ निटु सटरवाला लेखिएको नहोस् । तर यी प्रख्यात निटुका लागि बिहीबारको दिन पीडादायी बन्यो ।
दिउँसो ३ बजेर ४५ मिनेटसम्मको अन्तिम परिणाममा केबल ८४० मत मात्रै निटुलाई प्राप्त भयो । मतपरिणामको अन्तिम नतिजा आएपछि मतगणना केन्द्रमा आँखाभरी आँसु बनाउँदै उनले आफ्ना परिवारका सदस्यको बदमासी सुनाए । उनले आफ्नै घरका सदस्यले माता चिन्तपूर्णीको कसम खाएर पनि आफूलाई सबैले भोट नदिएको दुखेसो पोखे। निटसले आफ्नो परिवारका ९ सदस्यमध्ये आफूलाई केबल ५ जनाले मात्रै भोट हालेको बताए ।